Lakilasy 5 hanavotana ny fivoaran'ny rivotra amin'ny fahavaratra | Bezzia
Maria vazquez | 05/06/2021 10:00 | an-trano
Ny fahatongavan'ny fahavaratra sy ny fiakaran'ny maripana dia mahatonga ny tsy ao an-trano tsy ho zakain'ny maro nefa tsy manararaotra ny fividianana rivotra. Na izany aza, betsaka ny zavatra azontsika atao mba hahatratrarana fifandanjana sy mitsitsia ny aircon. Te hahafantatra ve ianao?
Ny fampihenana ny fihinanana aircon dia zava-dehibe na ho an'ny tontolo iainana na ho an'ny paosintsika. Misy lakile vitsivitsy zarainay aminao anio ary hahafahanao mamela anao mitazona ny tranonao hangatsiaka mampiasa ny aircon ihany raha tsy ilaina. Lakile toy ireto:
1 Insulate tsara
2 Fanamafisana rivotra
3 Fametrahana takona sy jirony
4 Fampiasana mpankafy
Ny insulation tsara dia fanalahidin'ny fitehirizana ny mari-pana. Tsy dia misy ilana azy ny fifehezana rivotra raha toa ka tsy voaravaka tsara ny varavarankely mamela ny hafanana ivelany hiditra ao an-tranontsika sy ny rivotra mangatsiaka omen'ny rivotra ao anatiny handosirana.
Ny fampiasam-bola amin'ny varavarankely voaravaka tsara dia hamela antsika tsy hampihena ny fotoana fanjifana mari-pana fa koa ny hery. Indrindra fa ny trano dia mitodika amin'ny fomba izay amamirapiratan'ny masoandro azy amin'ny ankamaroan'ny andro, dia mety ihany koa ny mametraka vera fanaraha-maso ny masoandro Izy ireo dia mampihena ny taratry ny hazavana tonga ary mamoaka ny hafanana.
Niresaka matetika momba ny maha-zava-dehibe ny a isika rivotra marina ny tranontsika. Noho izany, na dia amin'ny ririnina aza ny filamatra dia ny mivezivezy mandritra ny ora afovoan'ny andro, amin'ny fahavaratra dia ny manao azy no antomotra zavatra voalohany amin'ny maraina na amin'ny alina hisorohana ny fidiran'ny hafanana ao an-tranonay.
Aorian'ny rivotra sy alohan'ny hidin'ny afovoan'ny andro dia akatona ny varavaran'ny efitrano Tetika tsara foana hialana amin'ny fifanakalozana hafanana eo anelanelan'ny iray hafa. Amin'izany fomba izany dia hijanona ho milamina ny efi-trano miatrika ny avaratra ary hosakanantsika ny lalan'ny hafanana amin'ireo izay miatrika atsimo izay be loatra ny tohin'ny hafanana.
Fametrahana takona sy jirony
Any amin'ny firenentsika, noho ny hafanana be izay ankafizintsika amin'ny fahavaratra, dia sarotra ny maka sary an-tsaina ny trano tsy misy jamba. Mamela antsika ireo akatona mafy ny tranonay mandritra ny ora afovoan'ny andro, noho izany dia manampy amin'ny fitazonana ny tranontsika ho madio kokoa sy ho maizina koa.
Ny jamba, toy ny lambam-baravarana sy ny ambainy mafana, dia toy ny sakana amin'ny hazavana sy ny hafanana avy amin'ny masoandro. Raha aorian'ny fampidiran-drivotra voalohany amin'ny maraina dia mampidina ny lambam-pandriana isika, dia hihamangatsiaka kokoa ny efitrano. Fantatrao ve fa ny fampihenana ny savily dia afaka mampihena ny maripana an-trano hatramin'ny 10ºC?
Ireo mpankafy, indrindra ireo mpankafy valindrihana, dia mamorona fahatsapana fihenan'ny mari-pana eo anelanelan'ny 3ºC sy 5ºC, miaraka amin'ny fanjifana herinaratra tena ambany. Noho izany, raha tsy be loatra ny hafanana eto an-tanànantsika na tsy mandany fotoana be ao an-trano isika ary mitazona fanao mahazatra, ny mpankafy dia afaka manampy antsika hahatsapa ho mahazo aina mandritra ny fahavaratra ary hamonjy fifehezana rivotra.
Rehefa ilaina ny mampirehitra ny aircondition dia ilaina ny manao azy amin'ny loha. Ny fametrahana azy amin'ny mari-pana ambany kokoa noho ny mahazatra dia tsy hampangatsiaka haingana ny trano ary hiteraka fanjifana be loatra izay ho hita taratra ao amin'ny faktioran-jiro.
Raha ny filazan'ny Minisiteran'ny Indostria dia misy ny mari-pana mety amin'izany mihodina eo anelanelan'ny 24º sy 26ºC izy io. Ny mari-pahaizana tsirairay ampidininao amin'ny thermostat dia hitombo amin'ny 8% ny fihinanana. Raha atao teny hafa, raha apetrakao amin'ny 26ºC ny thermostat anao fa tsy 24ºC dia hamonjy manodidina ny 16% amin'ny fanjifanao ianao. Ho fanampin'izany, amin'ny onja hafanana na amin'ny andro mafana indrindra, ny fandinihana isan-karazany dia manolo-kevitra ny hampiasa tetika tsotra mba hialana amin'ny fanamafisam-peo: mametraka ny hafanana amin'ny hafanana vokatry ny fanesorana 12ºC avy amin'ny mari-pana ivelany.
Tsy lazaina intsony fa ankoatry ny fampihenana ny ora fanamafisam-peo, mividy fitaovana mahomby miaraka amin'ny mari-pamantarana A +++, dia hidika hoe mitahiry hatramin'ny 40% izany, hoy ny Association Energy Consumers Association ANAE.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Lakilasy 5 hanavotana ny mari-pana amin'ny rivotra amin'ity fahavaratra ity
Ahoana ny fomba hanombohana mihinana salama